Warar la xiriira weerar lagu qaaday hoteel ku yaalla Muqdisho. - Wargeyska Faafiye
Warar la xiriira weerar lagu qaaday hoteel ku yaalla Muqdisho.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa weerartay caawo hoteelka Ambassador oo ku yaalla waddada Makka Mukarama ee magaalada Muqdisho, halkaasoo ay ka soo baxayaan warar dheeraad ah. Wararka ayaa sheegayo in qaraxyo laga maqlay bannaanka hoteelka, gudahana ay u galeen dabley hubeysan.
Qaraxyada ayaa ahaa ismiidaamin. Inkastoo aan si dhab ah loo ogeyn inta uu la’ogyahay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkan, haddana wararka ayaa sheegayo in dad badan ay ku dhinteen oo ay ku jiraan ilaa hadda inta xaqiijiyey laba mudane oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, Cabdullaaahi Jaamac Kabaweyne iyo Maxamuud Guure.
Wariyaha Muqdisho, ayaa soo sheegayo in ciidamada dowladda ay hoteelka ka soo badbaadiyeen dad badan oo qaarkood ay yihiin xildhibaanno iyo mas’uuliyiin kale.
Ilaa 50 qof oo qabo dhaawacyo kala duwan ayaa ka geeyey isbitaallada magaalada, waxaana hadda socda howlo kale oo samata-bixin ah oo wali dadka hoteelka ku jira looga soo saarayo.
Wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya, waxay sheegtay in ciidamada dowladda ay hoteelka ku sugan yihiin oo ay wadaan howlgal sifeyn ah iyo in wali dadka ku xaniban laga soo badbaadiyo.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsMushaarka askariga Soomaaliya oo laga dhigay $160.Oscar Pistorius Not GuiltyRa’iisul-wasaaraha Soomaaliya oo ka tanaasulay saamiyadii uu ku lahaa Shirkadda SOMA OIL AND GAS.Maraykanka oo askar kala baxaya Yemen.Kooxda Qeylo-dhaan oo timid Muqdisho.